[ Apr 01, 2017 ] सपना भाउजूको बिहे
सपना भाउजूले यत्रो उमेरसम्म अर्को बिहे नगरी बस्लिन् भनेर कसैले सोचेकै थिएनन् । यसका केही प्रमुख कारणहरू यस्ता थिए- • उनी बिहेअघि निकै उत्ताउली थिइन् • बिहेपछि श्रीमानसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन…
[ Mar 26, 2017 ] सफलताको कथाः सम्बन्ध टुट्यो, पार्टनरसीप छुटेन
काठमाडौं । सम्बन्धबिच्छेदपछि कैयन जोडीहरुको भेटघाट मात्रै होइन, बोलीचाली नै बन्द भएको भेटिन्छ । सम्बन्धबिच्छेद पछि कैयनको जिन्दगी त समस्या नै समस्याको भूँवरीमा फस्छ । पत्याउनै गाह्रो हुने र अचम्म लाग्ने अष्ट्रेलियन एक डिभोर्सी जोडीले भने…
[ Mar 18, 2017 ] मालिकको व्यापार
मेरा मालिक धुरन्धर व्यापारी हुन् । उनको व्यापारको चर्चा टाढा-टाढासम्म फैलिएको छ । उनले केहीमा छोए भने घाटा भन्ने हुँदै हुँदैन भनेर बुझे हुन्छ । व्यापारका बादशाहको नाममा प्रख्यात छन् मेरो मालिक । मोटा जुँगा, ठूलो भुँडी अनि तिक्ष्ण…
[ Feb 25, 2017 ] पार्ट टाइम जब
"फेरि किताब भनेजस्तरी सर्टेट छैन !" ऊ थोरै झर्कियो । म केही बोलिनँ । अभ्यस्त भइसकेकी छु । सधैंजस्तो काममा ममाथि असन्तुष्टि पोख्छ ऊ । कहिले पोख्ने कुरामा, कहिले नपोख्ने कुरामा । वास्तवमा मान्छेको रिस उसको अहमको शक्ति प्रदर्शन…
[ Feb 11, 2017 ] राममान दाइको सुर्खेतयात्रा (कथा)
ध्रुव नेपाल l आँखामा हाले पनि बिझाउँदैनन् राममान दाइ। कसरी बिझाउनु, बिझाउने काँडाजस्ता कुरा केही छैनन् उनमा, बरु छन् खालि शीतलु कुरा। भनी बिराउन्नन्, सहयोगी छन्, आत्मीय छन् अरूको सुखदुःखको ख्याल गर्छन्।…
[ Feb 11, 2017 ] कोटेश्वरको कथा
समय: दिउँसोतिर स्थान: आफ्नै कार्यालय, बौद्ध "कता हो सरकार ? आज साँझ चिया खान भेट्न सकिन्छ होला ?" मोबाइलमा एउटा म्यासेज चुस्स आयो । मोबाइल खोलेर हेरेँ, हाइवेले पठाएको रै'छ…
[ Dec 24, 2016 ] भारी हुँदैन दाह्री
जगदीश भण्डारी (३०) साथीकोमा गएर मेसिनले दाह्री काट्थे । कामविशेषले साथी एक महिनाका लागि घरबाहिर गए । उनलाई ब्लेडले दाह्री काट्न अल्छी लाग्यो । एक महिनामा नकाट्दा दाह्री लामै भयो । फेसबुकमा दाह्रीसहितको फोटो पोस्ट गरे । साथीले त्यही…
[ Nov 23, 2016 ] लघुकथा : हजुरआमाको फेशबुक !
“ए बाबु ! मेरो पनि तिमीहरुको जस्तोे फेशबुक बनाईदेउन है ।” म झस्किएँ । आफ्नै शुरमा फेशबुकमा साथीहरुसँग च्याटमा मस्त भएको बेला एक्कासी मेरो नजिकै आएर हजुरआमाले यस्तो भन्नुभयो । “हाई सञ्चै हुनुहुन्छ ?” त्यत्तिकैमा…
[ Oct 29, 2016 ] एक्लो छापामार
दुर्गालाल केसी : “ओई... पुलिस आयो पुलिस...” खाना खाँदै गर्दा बाहिर कता–कता आवाज सुनिन्थ्यो । त्यसपछि खाना छाडेर उकालो दौडिहाल्थें । पुलिस देख्नु त के– पुलिस शब्द सुन्दा पनि शरीरका सबै रौं ठाडा हुन्थे ।
[ Sep 17, 2016 ] मन, लोग्ने र ऊ
"नमस्ते !" मेरो पछाडि कोही उभिएको थियो । चिनेकै जस्तो लाग्यो स्वर- फरक्क फर्किएँ । उही थियो । ७ वर्षपछि उसको शारीरिक बनोट मात्र होइन, छालाको रंग पनि फेरिएको थियो। उमेरभन्दा पाको देखिएरै होला-…
[ Jul 30, 2016 ] कोरियन ज्वाइँ
ऊ दङ्ग थियो। ‘छोरीको राम्रै केटासगँ बिहे गरिदिएँछु’ भन्दै ऊ गाउँको चौतारीमा फलाक्दै पनि हिँड्थ्यो। ऊ, अर्थात् देवीलाल पाण्डेलाई राम्नाकोट वडा नं. तीनमा सबैले कोरियावाला ज्वाइँको ससुरो भनेर चिन्न थालिसकेका थिए। अझ कोरियामा श्रमिकको तलब ७.३ प्रतिशतले बढ्दा…
[ Jul 30, 2016 ] रात्रीबसको यात्राबारे एउटा कथाः सीट नं- १२
“नानी एक्लै जाँदैछेस्…! बाटोमा अलिख चनाखो हुनु…। आइमाई भएको सिट मिलाएर बस्नु है, लामो बाटो छ…।” म हिँड्ने बेलामा आमाले नारी हुनुको कमजोरी अथवा भनौ आमा हुनुको स्वाभविक गुण देखाउदैँ मलाई ममत्व पस्कनु भयो । उहाँका आँखाबाट पुर्लुक्क…
[ Aug 29, 2015 ] ‘हजुर मेरो सेकेण्ड लव’
एउटी पाठकको आत्मकथा म उसलाई प्रेम गर्छु, सबैलाई थाहा छ। प्रेम गर्नु कुनै अपराध होईन। ऊसँग मैले यति प्रगाढ प्रेम गरेछु की ऊ विना म अपूर्ण छु। जीवनको एउटा मोडमा ऊसँग भेट भएको थियो। प्रत्यक्ष होईन भावनात्मक भेट।…
महोत्तरीमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण बाहिर, स्थानीय त्रसित
शाहीको उम्मेदवारीले ६ नम्बर प्रदेश तरंगित
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिप्रति ६ नेताको यस्तो प्रतिक्रिया
मुस्ताङको स्याउ : लोकप्रियता बढ्दै, किसान दङ्ग
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने-मलुकमा नेतृत्व देखिएन, मैले जिम्मेवारी लिने समय आयो
पुनर्निर्माणपछि पर्यटकलाई लोभ्याउँदै लमजुङको ऐतिहासिक राईनासकोट गाउँ
► Play 2826
► Play 836
► Play 459